ဖုန်းဆက်ရင်း လိမ်လည်ဖို့ ကြိုးစားသူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ဖုန်းဆက်ရင်း လိမ်လည်ဖို့ ကြိုးစားသူ
ဖုန်းဆက်ရင်း လိမ်လည်ဖို့ ကြိုးစားသူ
Posted by etone on Mar 14, 2012 in My Dear Diary | 39 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း လက်ကြောမတင်းတဲ့ လူလိမ်
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေကပေါ့ …. အပတ်စဉ်တိုင်း weekend ဆို အိမ်စောင့်နတ်နဲ့ … ရန်ဖြစ်ထားသော်လည်း ….. အဲ့ဒီနေ့ကတော့ ပူပြင်းတဲ့နေရောင်အောက် ၊ သပိတ်ရောင်လို အသားခြောက်မှာ ကြောက်တာနဲ့ ….. အိမ်တွင်းအောင်းခဲ့ပါတယ် … ။ ထွေထွေထူးထူး လုပ်စရာကလည်းမရှိတော့ …. အခွေတွေ တစ်ပုံကြီး ထိုင်ကြည့်ရင်း .. လေးတိ လေးတွဲနဲ့ အချိန်တွေဖြုန်းနေမိခဲ့တယ် ။ ထိုစဉ် ဖုန်းမြည်လာတာနဲ့ … ကြည့်လိုက်တော့ … ကိုယ်မသိ နံပါတ်တစ်ခုလေ …. ။
မသိတဲ့ နံပါတ်ဆို … ဖုန်းမှားတာမျိုးဖြစ်နေကြမို့ …… စိတ်မပါပဲ ပြန်ဖြေတော့ …. ကျွန်မဖုန်းနံပါတ်ကို ရွတ်ပြီး .. ဒီဖုန်းနံပါတ်ဟုတ်ပါသလားလို့ … တဖက်ကလူက စပြောပါတယ် … ။ ကျွန်မလည်း ဟုတ်ပါတယ် …. ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ ပြန်မေးတော့ …. ။ တစ်ဖက်လူက …. အစ်မ ကံစမ်းမဲပေါက်လို့တဲ့ …. ။ မှတ်မိသလောက် တစ်ခါမှလည်း ကံမစမ်းထားပဲ ..ပေါက်တဲ့ ကံစမ်းမဲဆိုတော့ ..အ လကားရမယ်ဆိုလို့ .. မျက်လုံးများတောင် ကျယ်လာပါသေးတယ် …. ။ လေးတွဲတွဲ ထိုင်နေရာက ကိုယ်ကို မတ်လိုက်ပြီး ….. ဘာကံစမ်းမဲပေါက်တာလဲလို့ မေးတော့ …. မိုးယံရွှေလမင်းနဲ့ မြတ်ဆုကုဋေကပေးတဲ့ ကံစမ်းမဲပေါက်တာပါတဲ့ ….. ။ တခြားက ကံစမ်းမဲဆိုလျှင်ဖြင့် ကျွန်မယုံချင်ယုံဦးမယ် .. ထီဆိုင်က ပေးတဲ့ ကံစမ်းမဲကာလ ရပ်သွားတာ ကြာလှမှန်း ..ကောင်းကောင်းသိနေခဲ့တော့ … ဒါ အလိမ်မှန်း ကျွန်မကောင်းကောင်း ရိပ်မိသွားပြီပေါ့ … ။ ဟိုးတစ်လောကလည်း .. ဘယ်သူလည်းမသိ ပို့စ်တင်ထားတာ ဖတ်လိုက်ရတယ် … ထီပေါက်တယ်လို့ လိမ်ပြီး ထီလက်မှတ်ဝယ်ခိုင်းတဲ့ အကြောင်းပါပဲ … ။ ကြားဖူးနားဝလေးကလည်း ပြန်သတိရမိတော့ …. နည်းနည်းဖွချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ် … သူကပြောသေးတယ် … ကျွန်မကို .. ဒီဖုန်းနံပါတ်ပေါ်လားတဲ့ …. သူ့ကိုပြန်ခေါ်ပါတဲ့ … ဖုန်းက နည်းနည်း ကြာကြာပြောရမှာမို့ ဆိုပဲ … ။ ဘာမှန်မသိတဲ့ လူက ပြန်ခေါ်ပါဆိုတာကို ….ကျွန်မကလည်း .. တမိနစ် ငါးဆယ် ပဲဖြစ်ဖြစ် ငါးပြားကိုယ့်ဘေလ်ထဲက အကုန်ခံပြီး ..ပြန်ခေါ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး …. ။ ဒါကြောင့် .. ကျွန်မဖုန်းမှာ နံပါတ်မပေါ်ဘူး … ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်သွားလို့ …. ပြောစရာရှိလျှင် အခုပဲပြောလို့ပြောပြီး ….…. ဟလို .. ဟလို .. သိပ်မကြားရဘူး .. လိုင်းမမိဘူး ခဏလေးနော် …. ပြတင်းပေါက်နားသွား ပြောမယ် ကိုင်ထားဆိုပြီး … ရကောရင်း လုပ်တဲ့ ခလုပ်နှိပ်ထားလိုက်တယ် …. ။
အသံကတော့ .. သတ်လတ်ပိုင်း အမျိုးသား တစ်ယောက်အသံပါပဲ .. အသံခပ်သြသြနဲ့ … လိမ်ဖူး .. ညာဖူး .. အတွေ့ကြုံရှိတဲ့ အသံမျိုးပါပဲ … ။ စကားပြောလည်းကောင်းပါတယ် .. လေယူလေသိမ်း အဖြတ်တောက်နဲ့ ..အသက်ရှုသံကို …မှန်းကြည့်ရလျှင် … အတွေ့ကြုံရှိပြီးသား ပိပိရိရရိပြောဆိုလိမ်လည်သူမှန်း ရိပ်စားမိပါတယ် …. ။ အသံဖမ်းထားပြီးတော့ .. ကျွန်မက ရပြီ ဆက်ပြောပါဆိုတော့ … အစ်မ ထီထိုးဖူးလား ဘာလားပေါ့…. ။ အင်း ထိုးဖူးတယ် အဲ့ဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ ပြန်မေးတော့ …. အစ်မကံစမ်းမဲပေါက်တယ်တဲ့ …. ထီပေါက်တာမဟုတ်ဘူး ..ကံစမ်းမဲပေါက်တာပါတဲ့လေ … ဟိဟိ …ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်က ကောင်လေးတွေ … အရင်နေ့က အစ်မဆီ ဖုန်းမဆက်ဘူးလား ဘာလားနဲ့ …. ကျွန်မလည်း … ရေလိုက်ငါးလိုက် ပြန်ပြောရတော့တာပေါ့ … ဘယ်သူမှ မဆက်ဘူးပေါ့… အခုတောင် ဒီက အစ်ကို ဖုန်းဆက်ပြောလို့ သိတာ ကျေးဇူးပါ ဘာညာ ပြန်ပြောရတော့တယ် … ။ ဒါနဲ့ကျွန်မလည်းတစ်ဆက်တည်း .. အဲ့ဒီတော့ ဘာရမှာလဲ မေးတော့ …. အစ်မပေါက်တဲ့ ဆုမဲ အမျိုးစားလေး မှတ်ထားပါဦးနော်တဲ့ …. တိုရှီဘာ အမျိုးစား … ၂၁ လက်မ … LCD ဆိုတဲ့ စကားကို .. တလုံးချင်း .. ထိထိ မိမိ ကျွန်မ မကြားလိုက်မှာ စိုးလို့ … ရေရွတ်နေရင်း … တီဆိုပြီး .. ဖုန်းပျက်ကျသွားတယ် … ။ ကျွန်မဖုန်းက တကယ်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်ခံနေခဲ့ရတာပါ …. ဒါကြောင့် ရကောရင်းလုပ်လျှင် စက္ကန့်ပိုင်းလောက်နဲ့.. အော်တို ပြတ်ပြတ်သွားတယ် …. ။ သူများ ပြန်ခေါ်ဦးမလား .. စောင့်ပါသေးတယ် …. ။ သူလည်း .. အသံအကဲခတ်တော့ကျွမ်းကျင်မယ့်လူဖြစ်မယ်ထင်တယ် …. ကျွန်မမယုံတာ ရိပ်စားမိလို့ထင်ပါရဲ့ …. ဖုန်းပြန်မခေါ်တော့ဘူး … ။
ညနေပိုင်းရောက်လို့.. လှိုင်သာယာဗစ်တိုးရီးယား ကိုခဏရောက်တော့ … မိုးယံရွှေလမင်းထီဆိုင် … အဲ့ဒီမှာ ဖွင့်ပွဲလုပ်နေတာနဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံပါတယ် … အလိမ်မှန်းသိပေမယ့် … သေချာ သိချင်စိတ်နဲ့ .. သူတို့ကို မေးပါတယ် ကံစမ်းမဲ အစီစဉ်တွေ တနှစ်စာဖောက်ပေးတာမျိုး ရှိသလားပေါ့ .. သူတို့ကလည်း မရှိပါဘူး … ကံစမ်းမဲအစီစဉ်တွေက ပြီးပြတ်သွားပါပြီလို့ ကျွန်မသိထားခဲ့သလို … ဖြေပါတယ် …… ။ ဒါဆို …. ကျွန်မဆီဖုန်းဆက်သူက … ပိပိရိရိလိမ်ဖို့ကြိုးစားသူဆိုတာ.. သေချာသွားပါပြီ … ။
နောက်နေ့ ရုံးပြန်တတ်တော့ …ရုံးက အစ်မတစ်ယောက်နဲ့ စကား စပ်မိရင်း …သူလည်း .. အဲ့ဒီလို ဖုန်းမျိုးကြုံခဲ့ရဖူးကြောင်း ပြောပါတယ် …. ။ သူဆီလည်း .. ထီထိုးရင်း ထီဆိုင်ကပေးတဲ့ ကံစမ်းမဲပေါက်တယ်လို့ အကြောင်းကြားပါသတဲ့ … ။ ကံစမ်းမဲပေါက်တဲ့ လူတွေအတွက် .. ထီဆိုင်က ဗေဒင် အခမဲ့မေးပေးတဲ့အခါ … အားလုံးစပ်ပြီး ထီအုပ်ကြီး ပြန်ထိုးရမှာပါတဲ့ .. ။ သူကိုယ်တိုင်အိမ်ကိုလာပြီး ထီရောင်းပေးပါမယ်လို့ .. တတွင်တွင်ပြောနေတာကြောင့်.. ရုံးက အစ်မလည်း … ကံစမ်းမဲလည်းမယူဘူး .. ထီအုပ်ကြီးလည်း မ၀ယ်ဘူး ..လာလည်း မလာနဲ့လို့ … ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောလိုက်တော့မှ …. ဇာတ်လမ်းပြီးသွားသတဲ့ … ။ ထီအုပ်ကြီးကလည်း .. တစ်စောင်နှစ်စောင်မဟုတ်ပဲ .. အုပ်လိုက်ထိုးရမှာကိုး … ကံစမ်းမဲထက် .. ထီဖိုးက ပိုကြီးနေတာမျိုးပေါ့ … ။
လူတွေ .. လူတွေ ..သမ္မာအာဇီဝနဲ့ …. ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်ရှာစားလို့ရပါလျှက် ဘာလို့ သူတပါးကိုမှ လိမ်လည်စားတာကိုမှ ခုံမင်နေရတာပါလဲ … ။လူလိမ် ၊ လူညာဆိုကတည်းက … စိတ်ဓါတ်နိမ့်ကျသူ .. လက်ကြောမတင်းသူဆိုတဲ့ .. ဂုဏ်ပုဒ်တွေပါ … တွဲပါလာပြီးသားမို့ …. သူများတွေလို ကာယ ၊ ဥာဏ အားကိုးပြီး .. သမ္မာအာဇီဝ ရှာစားဖို့ စိတ်ကူး ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး … ။ တစ်ယောက်ကို မလိမ်ရလျှင် .. နောက်တစ်ယောက်ကို လိမ်နေဦးမှာပါပဲ .. ဒီလိုပဲ…. တစ်ယောက်ကို လိမ်လို့ ရလျှင်လည်း ..နောက်တစ်ယောက်ကို အချဉ်ဆိုပြီး .. ထပ်လိမ်ချင်နေဦးမှာပါ … ။ ဘုမသိ ဘမသိ … အလကားရမယ်ဆိုတဲ့ ကံစမ်းမဲကိုမျှော်တွေးရင်း … လိမ်လည်ကာ အိမ်တိုင်ရွာရောက် ထီရောင်းခံရသူ … ဘယ်နှစ်ယောက်များ ရှိခဲ့ပြီလဲ … ။
ကျွန်မကြုံခဲ့ရသလို ….. အလားတူပြသနာမျိုး .. ရွာသူရွာသားတို့ ကြုံလာလျှင်လည်း… အယုံလွယ်ပြီး .. အလိမ်မခံရစေဖို့ …. ရေးပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် … ။ သူ အသုံးပြုပြီး ခေါ်သွားခဲ့တဲ့ .. ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ …. 0943074923 ပါပဲ ….. သူ့အသံဖမ်းထားတာကိုတော့… evidence အနေနဲ့ သိမ်းထားပေမယ့် … …… မတင်ပေးတော့ပါဘူး…. ။ … ရွာသူရွာသားများနဲ့ စာဖတ်သူအားလုံးပဲ လူလိမ်ခံရခြင်းမှ … ကင်းဝေးကြပါစေနော်
သူ့ခမျာလည်း ဘယ်ဝဋ်ကြွေးလည်းမသိဘူး .. အိတုန် ဖုန်းမှ ကံမကောင်းစွာနဲ့ခေါ်မိသွားတယ် .. :grin: :grin:
ဟလို အန်တီ ဆန်သေးပါလား……….. ကံစမ်းမဲပေါက်နေပါတယ်….. မိုးပျံ ငွေလမင်းနဲ့ မြက်ဆုကလိမ်ကပါ……….ဟုတ်ကဲ့ လေအိတ်ကားကြီးပါ…………. အရုပ်ဆိုင်မှာ တွဲလွဲချိတ်ထားပါတယ်………. အာဟိ အာဟိ ………..အာဟာ ဟုတ်လဲဟုတ်ဘဲနဲ့……… အာဟာ ဟုတ်လဲဟုတ်ဘဲနဲ့………. ရှိတယ် မအိတုံရေ ဒါမျိုးတွေက ရိုးနေပီလို့ ပြောလိုက်တာဟုတ်ဘူးအေ……
ဘာရမလဲ.. အန်တီ တုံး ပဲ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့..
နံပါတ် တခုကိုတော့ နောက်တခါ ဆက်လာမယ်တော့ မထင်ပါဘူး။
ဟိုတလော လေးကတင်အသိကောင်မလေးတယောက်ဖုန်းကို ဆက်လာတာ ဒေါ်အိတုန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျ..
ပေါက်တဲ့ပစ္စည်းကလဲ အတူတူပဲ.. အရင်ကတော့ နယ်တွေမှာပဲလုပ်တယ်ကြားဖူးတာ..
သေချာတာကတော့ အဲဒီကောင် အခုကံဆိုးသွားရှာပြီ..
ကံဆိုးသူမောင်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ .. ကိုထူးဆန်းရေ … ။ ဒါပေမယ့် ဒီလူ .. လိပ်ကို ကြမ်းဖိုးဖြစ်အောင်ပြောတတ်တယ်နော် .. လေယူလေသိမ်း ပိုင်တယ် … ဘဲကတောင်ပြောနေသေးတယ် … မင်းဖုန်းကို တောကဖုန်းအောက်မေ့လို့တဲ့ …သူတို့ပစ်မှတ်က.. မြို့စွန်နဲ့ နယ်ဘက်ကလူတွေကို အဓိက ပစ်မှတ်ထားသတဲ့… ။
ဟုတ်တယ်ကိုသူရရေ .. နည်းနည်းတော့မွှေပေးရမှာ … ကြိုတင်ကြံစည်ထားတာ မဟုတ်တော့ ..မေ့နေခဲ့တယ်လေ … ။
အစ်မဆူးပြောသလိုပါပဲ.. နံပါတ်တစ်ခုကို နှစ်ခါတော့ မဆက်ဘူးထင်ပါတယ် … နောက်တစ်ခါဆိုလျှင်တော့… အဲ့လူ အသေချာ ကံဆိုးတာပါပဲ… လူလိမ်တွေဆို မုန်းတယ် … ထပ်ကြုံလျှင် ထောင်ပြီးကို … ဖမ်းဦးမယ် … ။
ကိုအမတ်မင်းရေ … ကျွန်မလည်း အင်တာနက်ထဲ ကြားဖူးနားဝရှိတာရယ် .. မိုးယံရဲ့ထီ ကံစမ်းမဲကာလပြီးခဲ့တာရယ်ကို သေချာ မှတ်မိနေခဲ့လို့မယုံတာပါ ..ထီပေါက်တယ်လို့ ပြောလျှင်တောင် ယုံချင်ယုံဦးမယ် … ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်လေ ..ကိုယ်ခံရသလို သူများတွေ .. မခံရစေချင်လို့ …. အွန်လိုင်းထဲ တက်ဖွလိုက်ပါတယ် … ။ အထောက်ထားပြမှ ယုံမယ်ဆိုသူတွေအတွက်လည်း.. လက်ထဲ .. အသံဖိုင်ရှိနေပါကြောင်း …
အဲ ဖုန်းတွေက အငှား ဒါမမဟုတ် လမ်းဘေးဖုန်းတွေ ဖြစ်တာများပါတယ်..
နှစ်ခါရှိပီ ကြုံရတာ …
နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ နုံ ချင်ယောင်ဆောင်ပီး ချိန်းတဲ့နေရာ သွား ကြည့်သင့်တယ်ဗျ …
အဲဒါမှ လူလိမ်မိမှာလေ ….
ဟုတ်တယ် ဂျူဂျူးမရေ … အဲ့လို လုပ်လိုက်ဖို့ .. မတွေးမိဘူးဖြစ်သွားတယ် … ။ ဖုန်းက ကျသွားတာနဲ့ရောပြီး .. သူလည်း မဟန်ဘူးထင်ပြီး … လစ်သွားတာဖြစ်မယ် … ဖုန်းနံပါတ်အရတော့.. အဲ့ဒါ ငါးသိန်း ဂျီ အက်စ်အမ်ဖုန်းနံပါတ် ….. အဲ့ဒီလို ဖုန်းတွေက … အထိုင်ဖုန်းသုံးပြီး … အများသုံးတယ်လီဖုန်းလုပ်စားတာ… မရှိသလောက်ပဲ .. (မတွေ့ဖူးလို့ပါ) .. သာမန်အားဖြင့် … စီဒီအမ်အေတွေလောက်သာ .. အထိုင်ဖုန်းလုပ်ပြီး … အငှားပေးဆက်တာများတယ် … ။
လိမ်တဲ့ လူ က ကံဆိုးတာပဲ
လိမ်တဲ့ သူတွေရေ ဂေဇက် ရွာသူတွေကိုတော့ မထိလေနဲ့ အသေနှက်ခံရမယ်သာမှတ်
ဘယ်သူလဲကွ ဟေ…… Etone ကို ဘာမတတ်ညာမတတ်နဲ့ လာမပတ်နဲ့
မနူးမနပ်နဲ့ အရူးဇာတ်ခင်းသွားမယ်။သတင်းစကားကြွယ်လို့ ..လာလာမရစ်နဲ့ဟေ့ဂျာနယ်လစ်ကွ
ခင်ဗျား မိန်းမ ကလေးမွေးနေလို့ အမြန်လာပါလို့
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ် နီးပါးတုံးက ဖျာပုံမြို့မှာ အလိမ်ခံရတာ ၅ယောက်လောက်ပါသွားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ အိမ်က အမေ တောင် ပိုက်ဆံတော်တော်ပါသွားတယ်။လိမ်တဲ့သူ ကလမ်းဘေးဖုံးကို ပုတ်ပြတ်နဲ့တနေကုန်ဌားထားတယ်လို နောက် အလိမ်ခံရပြီးတပတ်ကြာမှ သိတယ်။အိမ်က အမေ တို အ ချက် ။ဆက်တာ က မင်္ဂလာဒုံ က လမ်းဘေးဆက်သွယ်ရေးဖုံး။ဆက်တာ ကလည်း ယောင်္ကျားအသံ ။သူ့ကိုငွေလွဲပေးရတာ။အမေတို့ အ ချက်
အင်းးးးး လိမ်ပုံများးးး လိမ်ပုံများးးး
ရွာမှာဆို ခံရတဲ့သူတွေ မနည်းဘူးးး
ဖြဲသီးလေးရေ .. အဲ့ဒီအချိန်က …အချွန်နဲ့မဖို့ .. အကြံ လုံးဝကို …ထွက်မလာတာနာတာပဲ …။
နည်းနည်းတော့ မွှေပေးလိုက်ရမှာ … ကြိုတင်စဉ်းစားထားတာမရှိတော့ ဘာမှ မပြောဖြစ်လိုက်ဘူး ….. ဒါပေမယ့်လည်း အသက်ရှင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး .. ကြုံတော့ကြုံဦးမှာပါပဲ … သူတို့ကလည်း .. တယောက်နှစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ .. အုပ်စုလိုက်ကိုရှိတော့.. ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လိုခေါ်ပြီးပြီဆိုတာ .. မှတ်ထားမိဟန်မတူဘူး ….
ကိုရင်မောင်ရေ …. အယုံမလွယ်လိုက်တာ …အင်တာနက်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလို့ပြောရမယ် …. ကိုယ်တိုင်မကြုံဖူးပေမယ့် ..သူများတွေ ကြုံတဲ့အကြောင်း .. အင်တာနက်ထဲ ဖတ်ဖူးနေတော့ … သတိထားမိတာ … ။ ကြားဖူးနားဝသာ မရှိခဲ့ဘူးဆို …. ထီပေါက်တယ် ၊ ကံစမ်းမဲပေါက်တယ်ဆို ..ယုံလည်းယုံပြီး … ပျော်မှာပေါ့ … အဲ့ဒီစိတ်ကပဲ .. အလိမ်ခံရဖို့ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသေချာပြီ .. ဟီး
ဖျာပုံသူရေ ….. တစ်နေလုံးပုတ်ပြတ်နဲ့ ဖုန်းငှားတယ် ဆိုလျှင်တော့ .. လိုက်ရတာ လွယ်မယ်ထင်တယ် … ။ လမ်းဘေးဖုံးဆိုတော့ .. အဆိုးရဖုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ် … ကောင်မလေးတွေက … ဖုန်းတစ်လုံးပေးပြီး .. သွားချင်ရာသွားနေကြသလားဆိုတာလည်း စိတ်ဝင်စားမိပါတယ် … ။ နောက်ပြီး .. ဘေးမှာ ရှိနေတယ်ဆိုလျှင်တောင်…. ဒီလူဘာပြောနေသလဲဆိုတာ … ကြားမိ ၊ သတိထားမိမှာပါ … ။ ကြည့်ရတာတော့ … အများသုံးဖုံးဆိုင်က ကောင်မလေးတွေ ….. မုန့်ဖိုးရလို့များ … ပြန်မဖော်ကြသလား .. စဉ်းစားစရာပါပဲ … ။
ကိုထွန်းဝင်းလတ်ရေ …. သူတို့ လိမ်လျှင် ရမယ့် အကျိုးမြတ်နဲ့ .. ဖုန်းခယှဉ်လျှင် … အဆပေါင်းများစွာကွာတော့ … ဒီလောက်တော့ ကျေကျေနပ်နပ် ရင်းကြမယ်ထင်တယ် … ။ ခံလိုက်ရတဲ့ လူတွေကလည်း … အလိမ်ခံရတာ ရှက်စရာလို့မြင်ပြီး နှုတ်ဆိတ်နေမယ့်အစား … မိမိနဲ့ မိမိရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို … အလားတူ အခြေနေမျိုးနဲ့ မကြုံရအောင် … ပြောပြပေးသင့်တယ်လို့ .. ထင်ပါတယ် … ။
အဲဒီလို လိမ်နည်းတွေက ရိုးနေပြီလို့ပဲ ပြောရမလား မသိပေမယ့်
ခုချိန်ထိ ခံရတဲ့သူတွေလည်း ခံနေရတုန်းပဲ။
ဟုတ်ပါ့။ အစ်မတုန်းကလဲသားလေးနာမည်နဲ့ထီထိုးခဲ့တာ။ နောက်အိမ်ကိုဖုန်ဆက်လာတယ်။ တိုင်ကပ်နာရီ မဲပေါက်တယ်တဲ့။ ကလေးနာမည်နဲ့ဘုန်းကြီးကိုမေးတာ သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကနံပါတ်ပေးလိုက်တာ။ ထိုးပါဆိုပြီးတော့။ ထိုးရမှာကလဲအုပ်လိုက်။ ၅ သိန်းဖိုးတဲ့။ ဒါနဲ့အမ လဲအိမ်လာခဲ့။ မဲပေါက်တာလဲယူခဲ့။ ထိုးဖို့ကတော့နံပါတ်ကြည့်ရအုံးမှာဆိုခေါ်လိုက်တာ။ မလာတော့ဘူး။ ဦးလေးကျတော့ လဲအဲလိုပဲ။ ဦးလေးကတော့ထိုးမယ်ဆိုပြီးချိန်းတာ။ လာတယ်။ မဲပေါက်တယ်ဆိုတဲ့နာရီလဲပါတယ်။ သူကလက်ပတ် နာရီအကောင်းစား။ ပိုက်ဆံလဲပါတယ်။ ဒီမှာဆိုပြပြီး ထီအုပ်စစ်မယ်ဆိုတော့မစစ်ပါနဲ့တဲ့။ မစစ်ရရင်မ၀ယ်ဘူး ဆိုတော့စစ်ဆိုစစ်လိုက်တော့ အပေါ်တရွက်နဲ့အောက်တရွက်ပဲထီလက်မှတ်။ ကျန်တာကစာရွက်ဖြတ်စတွေ။ အဲလိုလိမ်တာကတော့ကမ်းကုန်။
ဒါကတော့ သူကံနိမ့်နေလို့ Etone နဲ့ တွေ့သွားတာလေ…
များသောအားဖြင့်တော့ သူတို့ အောင်မြင်အောင် လိမ်နိုင်ကြတာများပါတယ်။
အဲဒီလူလိမ်တွေဟာ ဘာမှ တခြားအလုပ်မလုပ်ပဲ
အစုလိုက်အဖွဲ့လိုက် တလျှောက်လုံး လိမ်စားနေကြတာ။
နေအေး ရဲ့လိမ်နည်း တစ်ရာ စာအုပ် လေး ဟို တလောက လမ်းဘေး မှာတွေ့မိသေးတယ်။ အဲလို နည်းတွေပါတယ်။ အိတုန် နဲ့တွေ့တာ ဒီကောင် ကံဆိုးသွားတာ …. ကျွန်တော့အိမ် ကို ဘုန်းကြီးပါဆိုပြီး လိမ် အလှူခံတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး က ဖုန်းဆက် ပြီး ဒုတိယ အကြိမ်ထပ် လိမ်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ် 09-73178071 …. line ဖုန်း မှာ Caller ID တပ်ထားတော့ မြင်နေရတာပေါ့လေ။ ပထမ တစ်ခါ တော့ အလိမ် ခံလိုက်ရတယ်ဗျို့  …။ ထားပါတော့ စိတ်ဖြတ်ပြီး လှူလိုက်တာမို့ …. နောက်တစ်ခါတော့ မရဘူး .. :-)
လောကီ လူ့ဘဝ မှ အို လူသားအပေါင်းတို့ ။
အကျွန်ုပ် ပြောလိုသည်ကား လောဘ ကို သင့်တင့် မျှတ အောင် ထားပြီး
ဘေးမသီ ရန်မခ လိုရာဆန္ဒကို ကြိုးစားခြင်း ဖြင့်ရယူကြပါလော့။
အလွယ်နည်း ၊ ဖြတ်လမ်းနည်းဖြင့် လောဘဇောတိုက် ပါလျှင် ကံမကောင်းခြင်းများ
သင့် အတွက်သာလျှင် ဖြစ်ပေချိမ့် ။
အန်တီမမရေ .. လိမ်နည်းတွေက ..ရိုးနေပေမယ့်လည်း … မ ကြုံဖူးသူအတွက်တော့.. အသစ်အနေနဲ့ .. အလိမ်ခံရတုန်းပဲ … ဂွင်ဆင်ထောင်ဖမ်းအရေးယူမယ့်လူတွေရှိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် … အထူးသဖြင့် နာမည်အလွဲသုံးစားတပ်ခံရတဲ့ ထီဆိုင်က … စပြီးလှုပ်ရှားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် … ။
အစ်မသဲနုအေးရေ …. သူတို့က ရေလိုက်ငါးလိုက် တကယ်ပြောတတ်တယ်နော် … ။ သူက အရင်စမေးတာတွေဖြေပြီးမှ .. ကိုယ့်စကားကိုလိုက်ပြီး … ပြောတာ … အထာတော့ .. အတော်နပ်နေပုံရတယ် …. ။ အစ်မဦးလေးလည်း ကံကောင်းလို့ ….ထီစစ်လိုက်လို့ မခံလိုက်ရတာ … အိမ်တိုင်ရာရောက်လာလိမ်တာ .. မောင်းထုတ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ် … ။
အဲ .. အန်ကယ်ကြီးပြောတဲ့ နည်းကလည်း .. အဆန်းပါလား ဗျို့ ….. ။
အလိမ်မခံရဖို့ … ဗဟုသုတအနေနဲ့လည်း မှတ်သားထားပါတယ် … ။ ထီကို … ပိုက်ဆံပိုတင်ပြီး ရောင်းတာ၊ လိမ်တာ .. မဟုတ်ပေမယ့် …. ငါးရောင်းသလို .. အောဟစ်ပြီးရောင်း .. အတင်းလက်ဆွဲပြီးရောင်းတာတွေကတော့ မြင်ရတာ အချိုးသိပ်မကျသလိုပါပဲ .. အထူးသဖြင့် ဘုရားပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ အချိန် ကြည်နူးနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်တောင် … ညစ်နွမ်းသွားသလိုပါပဲ … ။
ဦးဦးပါလေရာရေ … သူတို့ ဒီလောက် အုပ်စုဖွဲ့လိမ်တာတောင် .. ဘာလို့များ ပြသနာ မတတ်သေးတာလဲဟင် …. ။ မိသော်လည်း ….. ရဲလက်မအပ်ရက်တာက တကြောင်း .. သူတပါး ဘ၀ ပျက်ဆီးရာ ပျက်ဆိးကြောင်း မလုပ်ချင်တာက တကြောင်းနဲ့ …. ထိထိရောက်ရောက် .. မလုပ်ဖြစ်ပဲ ပြန်လွှတ်လိုက်တာတွေကြောင့်… တခြား လူတွေကို ထပ်လိမ်ဖို့ အခွင့်ရေးပေးလိုက်သလိုတွေ ဖြစ်နေတာပါ … ။
ကိုလုလင်ရေ … ဘုန်းကြီး ကဖုန်းဆက်လိမ်တယ်တဲ့ လား …. ။ အဲတော့ .. ဘာသာတရားကို ခုတုံးလုပ်ပြီး သင်္ကန်းစီးထားတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ၊ သီလရှင်တွေ (အတုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်) ပိုပိုများလာပါတယ် … သဒ္ဓါတရားထက်သန်မှုအောက်မှာ … အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ လူတွေ .. ဘယ်လောက်များ .. ခံရခက်မလဲနော်
ဇောက်ထိုး မိုးမျှော် သခင် ကိုယ်တော်ရေ .. (၀ူး မောလိုက်ထှာ) … အလိမ်ခံရတဲ့ လူအများစုက .. လောဘတတ်လို့ခံလိုက်ရတာ များပါတယ် … ။ သူများဆီကဟာ အလကားလိုချင်စိတ်နဲ့.. ငါးမျှားချိတ်ကို မမြင်တော့တာပါပဲ .. ။
လက်ပွေ.ရောင်းကြရတဲ.ထီအရောင်းသမလေးတွေကြည်.ရတာ သနားစရာပါ ။ ဒါပေမဲ. …….
နောက်ကွယ်မှာ စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိနေတတ်တယ် ….
များစွာသော အကြောင်းတွေထဲကတစ်ခုကတော. ရောင်းသားကောင်မလေးတွေကို ခေါင်းဆောင် (ဂုတ်စီး)
လုပ်တဲ.သူက ဆေးတစ်မျိုး (စိတ်ကြွစေသော) တိုက်ပြီး အလွန်ရဲတင်းစွာနဲ. ယောက်ကျားတွေကို
၀င်လုံးခိုင်း ၊အတင်းထီထိုးခိုင်းတယ် ။ ဒီမြင်ကွင်းတွေကို ကုန်သည်ပွဲစားတွေရှိတဲ.နေရာမှာ အများဆုံး
တွေ.ရတတ်တယ် ။မိန်းမတွေကတော.ကံကောင်းသား ……ဒီလိုအရောင်းမခံရဘူး ။
(နှာဘူးတွေဆိုပြီးဖဲ.တာနဲ.တူတယ် ၊၀တ်ထားတာလဲ ……လန်ပျံနေတာဘဲ )
ဒီပို.စ်နဲ.တော.သိပ်မဆိုင်သလိုဘဲမအိတုန်ရေ … ထီဆိုလို. ၀င်မန်.လိုက်တာ ….။
ဒါမျိုးလေးတွေ တင်ပေးရင် နောက်လူ အလိမ်မခံရဘူးပေါ့။
ဝိုးမန်း ပါဝါ လို့ ပြောလိုက်မယ် တုံတုံရေ။
Well Done !!! ;-)
အော် …. ရယ် ….
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်လောက်က လိမ်နည်းကြီး ကို ခုထိ အပ္ပဒိတ် မလုပ်နိုင်သေးဘူးကိုး …
ကျုပ် မားသားကြီးဆီ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်က အလားတူ လိမ်နည်းကားမျိုးနဲ့
ဆက်ဖူးပါကြောင်း…(ကံစမ်းမဲပေါက်တဲ့ ပစ္စည်းကတော့ ခေတ်အလိုက် ကွာသွားတာပေါ့နော်…)
ဘာ ကံစမ်းမဲပေါက်ပြီး လက်ခံယူဖို့ ရှိကြောင်း …ဘယ်ဆြာတော်ဂျီးရဲ့
သိဓ္ဒိတင်ထားတဲ့ ထီ ရာစည်းလောက် ထိုးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း …
အနှီ ရာစည်း ကို ထိုးဖို့ရယ်မှာ … ယောဂီ ၀တ်စုံနဲ့ လက်ခံယူရင်း…
ငွေကို စာအိတ်နဲ့ ထည့်ပြီးသကာလ… (အော်မေ့လို့ )
ပွဲထိုးထားတဲ့ ပွဲတွေဘာတွေ အခ တွေ လည်း ပေးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း…
(ရီရတယ်နော.. ပွဲထိုးခတွေထဲမှာပဲ … .ကိုယ်လက်ဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့
ကံစမ်းမဲပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းတန်ဖိုး က ပါသွားပြီးဖြစ်ကြောင်း..)
ကျုပ်မားသားကြီးကတော့ ဒါတွေအယုံအကြည်မရှိလို့ …. မခံလိုက်ရပေမယ့်
ခုခေတ်ထိ ဒါမျိုး ရှိနေသေးတာကိုတော့ အံ့ပါရဲ့ဗျာ….
အင်ဖော်မေးရှင်း လောကထဲ နေသူမို့ အင်ဖော်မေးရှင်းနဲ့ ပါတ်သတ်တာလေးရေးရရင်…
အနှီ ပုဂ္ဂိုလ် သည် … ပစ်မှတ် သားကောင်၏ နာမည် ဖုံးနံပါတ် လိပ်စာ ..ဘယ်ကရပါသနည်း…
ရှင်းပါတယ်ဗျာ …. သူ့နောက်မှာ …သားကောင် ထီထိုးဖူးတဲ့ ထီဆိုင် ရှိနေတာ………
ဒီလို …ကေ့စ်တိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင် … ထီကိုရောင်းတာချည်းပဲ ….(၇ာကတ်စီး)လောက်
ညာတယ်ပြောမရတဲ့ ညာနည်းတွေ ဗျာ….
ဟုတ်တယ်လေ. ..သူက ဘာညာသာဒကာ (ဘာသာရေး) သုံးပြီး ထီ သိန်းဂဏန်း
မားကတ္တင်း မှာတော့ ….ချန်နယ်လ် စတပ်ဖင်း …အပ္ပဆဲလင်း …ပဲ ပြောရမလားပဲ…..
ဒါ ပါဆင်နယ်လ် အင်ဖော်မေးရှင်းပေါက်ကြားမှုနော ….ထီဆိုင်အပေါင်းတို့…….
သေတောင် လျော်မဆုံးတဲ့ ကေ့စ်တွေ ဖြစ်ကုန်မယ်….
ကလိန်ချုံ အရောင်းသမားတွေ သုံးတဲ့နည်းတွေ စွန့်လွှတ်လိုက်ကြပါတော့ဗျာ……
ဘာသာရေး ခုတုံးလုပ်တာလည်း အပြစ်ကြီးလွန်းပါတယ်….ပြီး…
လူထု က ခင်ဗျားတို့ ထင်သလောက် မ အ တော့ပါဘူး ….
နွယ်ပင်လည်း ဒီလိုလိမ်နည်းမျိုးနဲ့ တစ်ခါကြုံဖူးတယ်
နွယ်ပင်ကိုတော့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာပေါက်တာပါဆိုပြီး ပြောတာလေ
နောက်ပြီး ဗေဒင်ဆရာက နွယ်ပင့်ကို ထီပေါက်ကိန်းမြင်လို့ ထီပြန်ထိုးရမှာဖြစ်လို့
အနည်းဆုံး (3) သိန်းဖိုးလောက်ပြန်ထိုးရမယ်ပြောတာ ။ ဒါနဲ့ နွယ်ပင်က
ကံစမ်းမဲပေါက်တဲ့ ကင်မရာကို ရောင်းပြီးကိုယ့်ဘာကိုယ် ပြန်ထိုးလိုက်ပါ
တကယ်လို့ ထီပါက်ရင်လဲ ယူလိုက်ပါလို့ ပြောလိုက်တယ်
ဒါတောင် သူတို့က မယုံလို့လား ဘာလားဆိုပြီး လုပ်နေသေးတာ …………….
ဗိုလ်အီးဒုံးကို လိမ်လို့ရမဒဲ့လားဟေ့.. ဒိုင်းညှောင့်…. ဒက်ကလုပ် ဒက်ကလုပ် ဒက်ကလုပ် (ဗိုလ်ကာတွန်းဇာတ်ကားထဲမှ လေသံနှင့်ဖတ်ရန်)
ကိုဆာမိရေ .. ဖတ်ပြီး … ကြက်သီးတောင်ထတယ် .. အဲ့ဒီလို စိတ်ကြွဆေးတိုက်ပြီး ခိုင်းစေမှုတွေတောင် ရှိသတဲ့လားဟင် … ကျွန်မအရင်ကထင်ထားတာ … သူတို့ကို မက်လောက်တဲ့ ကော်မရှင်ပေးထားတယ်ထင်လို့ .. အခုလို ဆေးတိုက်ပြီး … အလုပ်ခိုင်းတာကတော့ ဥပဒေနဲ့ မညီညွှတ်ဘူးလေ …. ။ အချက်လက်နဲ့ သိတဲ့လူတွေ ရှိလျှင်လည်း … ဖော်ထုတ်သင့်ပါတယ် … (လူမုန်းတော့ ခံရမယ်ထင်တယ် … ဟီး )
အန်တီပဒုံမ္မာရေ … ဟုတ်ပါတယ် .. အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ .. ဒီပို့စ်လေးရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ … ။ မကြုံဖူးသူတွေလည်း ဖတ်မိပြီး … ဆင်ခြင်တတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ် … ။
အရီးလတ်ရေ… အရီးလတ်တို့နေတဲ့ ပြည်မကြီးမှာရော .. ဘယ်လို လိမ်နည်းတွေများရှိမလဲနော် … နေရာတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့.. လူလိမ်တွေရှိတတ်မှာပါ .. အထူးဆန်း လိမ်နည်းလေးများ ရှိလျှင်လည်း သိချင်ပါတယ် … ။
ကိုဂီရေ … လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကတည်းက .. အဲ့လိုနည်းတွေ သုံးခဲ့ကြတာလား .. တော်သေးတာပေါ့ … အမေဖြစ်သူ အယုံမလွယ်လို့ပဲ …. ။
အင်တာနက်ထဲ သတင်းမပြန့်ခင်အချိန်ကကြံကြမယ်ဆို … ကျွန်မလည်း 100% ထိဖို့ သေချာနေတယ် … ။
အစ်မနွယ်ပင်ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမယ်နော် …. ။ သူတို့ပါးစပ်က ထီဘယ်လောက်ဖိုးပြန်ထိုးလို့ပြောလို့ပါ .. ဘုမသိဘမသိပဲ .. အိမ်ပေါ်ရောက်လာပြီးမှ .. ထီမထိုးလျှင်မဆင်းပါဘူးဆို .. ဒွတ်ခပဲ … ။အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်းအနေများတဲ့ လူတွေလည်း … သတိထားရတော့မယ် … ။
ဟီးဟီး ကိုကြောင်ကြီး … ဒိုင်းညှောင့်တောင် မလုပ်လိုက်ရ ဘူး …. ဟိုက လစ်သွားတယ် … ကြည့်ရတာ .. ကျွန်မလေယူလေသိမ်းက အပေါက်ဆိုးတဲ့ပုံပေါက်နေလို့ဖြစ်မယ် … ဘုရားပေးတဲ့ အသံနဲ့ .. စိတ်မရှည်တတ်တဲ့ အကျင့်ပေါင်းတဲ့ အခါ .. အမြဲလိုလို အဲ့ဒီအသံထွက်ပါတယ် … ။ စိတ်ညစ်ထှာ … သူများတွေဆို … . ချွဲချွဲပြစ်ပြစ် .. ကြိုးကြာသံလေးနဲ့ … ဟီး … ဒါကြောင့် အမေကပြောတာ .. နင့်အသံ အထရက်ရှင်မရှိဘူးတဲ့ .. စကားကို လူကြားကောင်းအောင်မပြောတတ်ဘူးလားတဲ့ …. ဘဲအော်သံနဲ့ တူသတဲ့ ဟီ
ဟုတ်ပါတယ် မအိတုံ ဒါမျိုးတွေမကြာခဏဖြစ်တတ်တယ် တစ်ချို့ဆို အိမ်ကိုလာလိမ်တာလေ ထီထွက်တဲ့ နေမှာ ထီးပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ မြန်မာပြည်ကကံစမ်းမဲတွေကလည်း တစ်ကယ်အမှန်အကန်မရှိဘူးလို့ ထင်တာပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ညီမတစ်ခါကြုံဖူးတယ် ဘီယာအဖုံးကနေပါတဲ့ဟာလေးတွေကို လက်ဆောင် ပေးတာလေ တော်ရုံဆို ဘောပင်လေးပဲပေါက်ကြတယ် ညီမက Calculator ပေါက်တယ် … Calculator ဆိုတော့ ဆိုင်တွေမှာထုတ်လို့မရတော့ဘူး ဘောပင်ထက်သာတော့ ကုမ္ပဏီထိညီမသွားထုတ်တာပေါ့ ကုမ္ပဏီရောက်တော့ ၀န်ထမ်းတွေကမျက်နှာပျက်နေကြတယ်လေ တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့အချင်းချင်းပြောနေကြ တယ် ခဏနေကြတော့ Calculator တစ်လုံးထုတ်ပေးတယ် နှိပ်ကြည့်တော့ မရဘူး သူတို့ကိုပြန်ပြောတော့ ဒါပဲရှိတယ်တဲ့ မလိုချင်ရင် ဘောပင်2ချောင်းယူတဲ့ ….. ကျွန်မလည်းအဲတုန်းက အထက်တန်းကျောင်းသူ ဘ၀ပဲရှိသေးတယ်လေ ဒီလိုနဲ့လက်လျှော့ပြန်လာခဲ့တယ် …. အခုချိန်ထိအဲဒီCalculator လေးအိမ်မှာရှိနေ သေးပါတယ် ….. အခုချိန်ထိလည်း ညီမစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်မှတ်ထားမိတာက ကံစမ်းမဲဖောက်ရင် ဘယ်တော့မှမယုံကြည်ရဘူးဆိုတာပါပဲ ………..
မခိုင်ရေ .. ကျွန်မစိတ်နဲ့ ဆို လက်တလုံးကြားလုပ်လျှင် …. အနည်းဆုံးတော့ .. စိတ်တိုတိုနဲ့ စကားနာထိုးခဲ့မိမှာပါပဲ .. မခိုင်က အထက်တန်းကျောင်းသူဆိုတော့လည်း .. အဲ့ဒီအချိန်က ဘယ်သိပ်ပြောရဲပါ့မလဲနော် … ။
တစ်ချို့သော ကံစမ်းမဲတွေက .. တကယ်ပေးတာဖြစ်ပြီး .. တစ်ချို့ကတော့.. ရောင်းအားတက်အောင်ပဲ ဟန်ဆောင်ပေးတာပါ .. ဘယ်သူတော့ပေါက်သွားပြီ .. ဆိုပြီ မီဒီယာတွေကနေ … ကြော်ငြာတယ် .. အဲ့ဒီဘယ်သူဆိုတာ .. သူတို့ အမျိုးတွေပဲ ဖြစ်နေတယ် .. ရယ်တော့ရယ်ရတယ် ..
မခိုင်ရေ မှတ်မှတ်ရရ… ကြုံခဲ့ဖူးတာလေးရှိတယ် … ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ပေမယ့် .. အဓိကနေရာမှာတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး .. ဒီလိုပါ တိုက်ရိုက်ကြီး .. ဖြစ်တဲ့ ပြသနာမဟုတ်တာကို ဆိုလိုတာပါ … ။ ပဒုံမ္မာကွင်းနားက .. အိတ်စပို့စ်ဆိုင် .. စဖွင့်တဲ့ နှစ်က … သင်္ကြန်ကဲဖို့ ညီမလေးက .. ဘောင်းဘီသွားဝယ်ခဲ့တယ် … ၀ယ်တုန်းကတော့ … ရွှန်းရွှန်းဝေအောင်စကားတွေပြောတယ်ပေါ့ … ။အဆင်မပြေလျှင် ပြန်လာပြောပါ ၊ ဆိုဒ်မတော်လျှင် လဲပေးပါမယ်တဲ့ … ။ နောက်နေ့ သင်္ကြန်လည်နေရင်း … ညီမလေးက .. ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတော့မှ .. ဘာဖြစ်သလဲ မေးကြည့်တာ … ဘောင်းဘီ ဂွပြဲသွားပါသတဲ့ .. ခုန်ပေါက်နေတာလဲ မဟုတ်ပဲ ..ထိုင်နေလျှက်နဲ့ မနေ့က ၀ယ်တဲ့ဘောင်းဘီ .. ဒီနေ့ .. ပြဲသွားတယ်ဆိုတော့ .. အသားက တိုက်ဆွေးမို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး .. အိမ်ရောက်တော့ ဘောင်းဘီကို လက်သည်းနဲ့ပဲ ဖိဖြဲကြည့်ပါတ ယ် … တိုက်ဆွေးမှန်း သေချာတဲ့အခါ ဆိုင်ကို ပြန်ပြီး .. သွားပြောပါတယ် … ။ တိုက်ဆွေးမှန်းလည်း .. သူတို့ စမ်းကြည့်ပါသေးတယ် သေချာလျှက်နဲ့… လုံးဝလဲမပေးတဲ့ အပြင် သင်္ကြန်မို့ … ခုန်ပေါက်နေလို့ ပြဲတာဖြစ်ကြောင်း .. ပြန်တောင်ရန်တွေ့ခံရပါတယ် … ။ ဂျင်းဘောင်းဘီ ဂွပြဲတာ .. ဖြစ်သင့်သလားရယ် … ။ ကျွန်မလည်း … အရည်သွေးညံ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေ တင်နေတဲ့ ဆိုင်၊ အပြောနဲ့ အလုပ်နဲ့ …မညီတဲ့ဆိုင်မှာ .. မ၀ယ်ဖို့ အမျိုးတွေကိုရော .. အပေါ်ထပ်အောက်ထပ် … ဆယ့် နှစ်ခန်းစလုံး လျှောက်ပြောပစ်မယ်လို့ ကျိန်းပြီး ပြန်လာခဲ့တယ် .. တကယ်တမ်းတော့ … မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး .. ။
မြန်မာ ဒယ်လ်သန် ကုမ္ပဏီ(ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း) ကတော့ … ကံစမ်းမဲ့လို့ ကြေငြာလျှင် တကယ့်ကို ပေးခဲ့ပါတယ် … ။ အိတ်ခွံလေးတွေ ၊ ပုလင်းခွံလေးတွေနဲ့ လဲတဲ့ အစီစဉ်ရှိလျှင်လည်း အဲ့ဒီအတိုင်းကို တကယ်ပေးတာပါ .. ။ မှတ်မှတ်ရရ … Eva အိတ်ခွံလေးတွေနဲ့ .. ပစ္စည်းလဲလှယ်တဲ့ အစီစဉ်အပြင် … ကံစမ်းမဲ နှိုက်တဲ့ အစီစဉ်တုန်းကလည်း … အတူတူ သွားတဲ့ ..သူငယ်ချင်း ရွှေ နှစ်ကျပ်သားပေါက်ခဲ့ဖူးပါတယ် … ။ လူများယုံအောင် အခမ်းနားနဲ့တော့ မပေးပေမယ့် … နာမည်လေး မှတ်ပုံတင်နံပါတ်လေးသာ စာရင်းကောက်ပြီး .. ရုံးမှာပဲ ကံထူးရှင်ကို ပေးခဲ့တာပါ … ။ အဲ့ဒါလေး အမှတ်ရမိပါတယ် … ။ အခုတော့ ပရိုမိုးရှင်းသိပ်မတွေ့တော့ဘူး … ။
မပေးနိုင်လျှင် မကြော်ငြာနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ် … ပေးမယ်ဆိုလည်း ..ပေးလိုက်ပေ့ါနော် .. မရှင်း မရှင်းရေးထားပြီး … ပြီးမှ ..၀ှိုက်လိုင်းတွေ ဘာတွေ လာပြောတဲ့ ဖိနပ်ဘရန်းတစ်ခုနဲ့လည်း .. အခြေတင်ပြောခဲ့ရဖူးတယ် … ။
“အော်”…. အဟောင်းတွေ က အသစ်ပြန်ဖြစ်လာသလိုပါဘဲ……
အဲလိုအဖြစ်ကို မေ့ထားခဲ့တာ ကြာပေါ့….
လွန်ခဲ့တဲ့ 10 တုန်းကပေါ့… အဟင့်.. အဟင့်..
လွန်လေပြီးသော 10 နှစ်ခန့် က အလိမ်ခံခဲ့ရပါသည်ရှင့်……
စကားပြောလည်းကောင်းပါတယ် .. လေယူလေသိမ်း အဖြတ်တောက်နဲ့ ..အသက်ရှုသံကို …မှန်းကြည့်ရလျှင် … အတွေ့ကြုံရှိပြီးသား ပိပိရိရရိပြောဆိုလိမ်လည်သူမှန်း ရိပ်စားမိပါတယ် …. ။
ဖြစ်ချင်တာက ..စုံထောက်ပါဟယ် …. ဒီနိုင်ငံမှာ မိန်းမစုံထောက်တွေ ..ဒီလောက်ကြီး ခေတ်မစားဘူး … ရုပ်ရှင်ထဲက စုံထောက်မတွေကတော့မိုက်တယ် .. လက်သီးတလုံးလောက်နဲ့ .. သွားကျွတ်သွားနိုင်တယ် အဟီး
TRADERS ရှေ့နားမှာ တရုတ်မတယောက်က လက်ကိုလာဆွဲပြီး
လက်ထဲကို ရွှေရောင်စက္ကူနဲ့ထုပ်ထားတဲ့ အထုပ်လေးအတင်းထည့်ပေးပြီး
အိမ်မက်အရ၊ပဠာန်းဆက်မို့လို့ရတာ၊အဓိဌာန်အောင်မယ် ဘာညာနဲ့ ပြောပြီး
မယူမချင်း လက်မလွှတ်တော့တာ..ယူလိုက်တော့လဲ ဖြည်မကြည့်ပါနဲ့တဲ့..
နောက်တော့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်ပြီးနံမည်နဲ့ လိပ်စာ ပေးပါတဲ့…
သူ့လက်ထဲအထုပ်ကို ပြန်ထည့်ပြီး ယူလဲမယူဘူး၊လှူလဲမလှူဘူးပြောခဲ့တော့တယ်…
အန်တီအိရေ … ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု ..သတိရမိတယ် … ဗိုလ်တထောင် ဘုရားသွားပြီး ..စာကလေးနဲ့ ဇရက် .. စုစုပေါင်း အကောင်သုံးဆယ် လွှတ်ရော … အဲ့ဒီထဲက တစ်ကောင်က ကုလားမတစ်ယောက်ရဲ့ ခေါင်းကို သွားနားပါတယ် … ။ ကြောက်ပြီးနားနေရင်းနဲ့ .. ကုလားမခေါင်းကို ခြေထောက်နဲ့ ကုတ်ပြီး ဘယ်မှလည်း မပျံပဲ .. အဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာကို .. ကုလားမက … လက်လေးနဲ့ အသာလေးဆွဲယူပြီး … ဘယ်သူလွှတ်တဲ့ ငှက်လည်း လိုက်ကြည့်တယ် … ။ ကျွန်မတို့တွေပဲ အနားမှာ ရှိတော့ .. လက်လာဆွဲပြီး .. ပဌာန်းဆက်ရှိတယ် ဘာညာာနဲ့ .. ငှက်ကို မလွှတ်ပေးသေးပဲ တတွတ်တွတ်ဆုတောင်းပါတော့တယ် … ။ ငှက်ကလည်း ဖြစ်ညှစ်ထားလို့ မနေချင်ပဲ ရုန်းနေတော့ပေါ့ … ။ ပြီးတော့ တိုးတိုးလေး ကပ်ပြီး … မယ်တော်ကြီးကျောင်းသွားဖို့ .. အလှူငွေ ထည့်ပါတဲ့ .. မထည့်ဘူးဆိုတော့လည်း ..လက်ကြီးဆွဲပြီး မလွတ်ပဲ .. ငှက်ကို အရမ်းဖိထားတယ် … ။ သူ့စေတနာရှိလို့ မဟုတ်ပဲ … ငှက်သနားလို့ .. ငါးရာတန်တစ်ရွက် ထုတ်ပေးလိုက်မှ … လက်လွှတ်တော့တယ် …. ။ ပြန်တွေးရင်း … ဒေါကီးတယ် … ။
ဟ နာတော့တွားပြီ နာ ဘုန်းချက်မိဒါ မအီးတုံးကျီးကိုး နောက်မလုပ်တော့ဘာဘူး အဟီးဟီး
တကယ်ဗဟုသုတ ရတယ်မမအိရယ် တကယ်ကောင်းတယ် ဖတ်ရင်းနဲ့ လူလိမ်တွေများများလိုက်တာနော် နည်းမျိုးစုံနဲ့ကိုလိမ်နေပါလားနော် …..
တကယ်ဗဟုသုတ ရတယ်မမအိရယ် တကယ်ကောင်းတယ် ဖတ်ရင်းနဲ့ လူလိမ်တွေများများလိုက်တာနော် နည်းမျိုးစုံနဲ့ကိုလိမ်နေပါလားနော် ။။။။